Fiber optic chinoumba kuratidzwa bvunzo - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Fiber optic yepakati yekuratidzira bvunzo inoenderera neOptical Nguva Domain Reflectometer (OTDR). Icho chiri chishandiso chinoshandiswa kunyatsoona zvikanganiso muiyo Optical fiber chinongedzo chematafura ekutaurirana. OTDR inogadzira kupisa mukati mefiber kuti iongororwe zvikanganiso kana hurema. Zviitiko zvakasiyana mukati mefibre zvinogadzira Rayleigh kumashure kuparadzira. Zviputi zvinodzoserwa kuOTD uye simba ravo rinobva rayerwa uye roverengwa sebasa renguva uye rakarongwa sebasa refibre. Simba uye chiratidzo chakadzorerwa chinotaura nezvenzvimbo uye kukura kwemhosva iripo. Kwete chete kugadzirisa, asi zvakare oparesheni mitsara yekumisikidza masevhisi anoshandisa OTDRs.
OTDR inobatsira kuyedza kuvimbika kwefibre optic tambo. Iyo inogona kuongorora splice kurasikirwa, kuyera kureba uye kuwana zvikanganiso. Iyo OTDR inowanzo shandiswa kugadzira "pikicha" ye fiber optic tambo kana ichangobva kuiswa. Gare gare, kuenzanisa kunogona kuitwa pakati pekutanga trace uye yechipiri trace yakatorwa kana matambudziko akamuka. Kuongorora kutsvaga kweTDR kunogara kuchiitwa nyore nekuve nemagwaro kubva kune yekutanga trace iyo yakagadzirwa pakagadzwa tambo. OTDR inokuratidza panogumiswa tambo uye inosimbisa mhando yefaibha, kubatana uye zvipenga. OTDR maratidziro anoshandiswa zvakare kugadzirisa matambudziko, sezvo achigona kuratidza kuti mabhureki ari mune fiber kana matanho akaenzaniswa nemagwaro ekumisikidza.
Jera enderera kuyedzwa kweFTTH kudonhedza tambo pane wavelengths (1310,1550 uye 1625 nm). Isu tinoshandisa OTDR YOKOGAWA AQ 1200 mune ino yemhando bvunzo. Kuongorora mhando tambo dzedu kuona yako mutengi anogona kugamuchira zvigadzirwa zvinosangana zvemhando yepamusoro zvinodiwa.
Isu tinoita bvunzo iyi pane tambo dzese dzatinogadzira.